Nayakhabar.com: रिचा शर्मा भन्छिन्–मैले मन्त्रीलाई खुशी पारेकी छैन !
रिचा शर्मा भन्छिन्–मैले मन्त्रीलाई खुशी पारेकी छैन !
काठमाडौं । यसवर्ष चलचित्र विकास वोर्ड मार्फत सरकारले वितरण गरेको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डको विवाद अझ चुलिदै गएको छ । अभिनेत्री तर्फको अवार्ड नम्रता श्रेष्ठलाई दिने जुरी सदस्यहरुको निर्णयलाई उल्टाउँदै सञ्चार मन्त्रीको इच्छा बमोजिम अर्कै अभिनेत्रीलाई दिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै यो विवादले थप उचाइ पाएको हो । जुरी सदस्यको निर्णयमा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले ठाडो हस्तक्षेप गरेको जुरी सदस्य करिश्मा मानन्धरको अभिव्यक्तिलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण भएको थियो । तर कपि पत्रकारिता गर्ने केही अनलाइनहरुले मन्त्री रिजालले नम्रतासँग सेक्स प्रस्ताव राखेको भन्ने भ्रामक खबर सम्प्रेषण गर्न थालेपछि यो विषयले अर्कै मोड लिएको छ । यस्ता भ्रामक समाचार सम्प्रेषणबाट मन्त्री रिजाललाई केही फरक नपरे पनि अवार्ड खोसिएका नम्रता र अवार्ड पाएकी रिचा शर्मालाई भने मानसिक तनाव भएको छ । पुरस्कृत अभिनेत्री रिचामाथि अवार्ड कसरी पाइन् ? भन्नेबारे नै प्रश्न चिन्ह उठेपछि अन्ततः उनी प्रष्टीकरण दिन बाध्य भएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्–‘मंगलबार अवार्ड हुँदै थियो । म विदेशमा थिएँ । आईतबार मात्रै म नेपाल आइपुगे । मलाई कुनै प्रकारको निमन्त्रणा पनि आएको थिएन ।
राष्ट्रिय अवार्डमा ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ पनि दिएको छ भन्ने कुरा चाहिं थाहा थियो । सोमबार बेलुका मात्रै मलाई फोन आयो विकास वोर्डबाट ‘तपाई उत्कृष्ट दुई नोमिनेशनमा पर्नु भएको छ’ भनेर । यो मेरो लागि पनि एकदमै अप्रत्यासित नै थियो ।’ रिचाले यसरी आफुले अवार्ड पाउदैछु भनेर पहिला नै थाहा नभएको जानकारी गराएपनि नायिका नम्रता श्रेष्ठलाई ‘उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड तपाईलाई दिइदै छ’ भनेर कार्यक्रम स्थलमा बोलाइएको विकास वोर्ड स्रोतले बताएको छ । तर यो विवाद यति उचाइमा पुग्दा पनि कसैबाट अधिकारिक जानकारी नआउँदा यी दुई अभिनेत्री मानसिक तनावमा परेकी छिन् । एउटा कुरा चाहिं सत्य के हो भने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार स्वीकृत गर्न सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न अनिवार्य छ । जुरी सदस्य मध्येका एक समीक्षक दीपेन्द्र लामाले यी सबै हल्लाहरु मिथ्या भएको न्यूज २४ लाई बताए । उनी भन्छन्–यसमा केही सत्यता छैन । जुरी सदस्यहरुको निर्णय बमोजिम नै सबै विधामा अवार्ड दिइएको छ । करिश्माको अभिव्यक्तिको वचाउ गर्दै लामाले भने–पाँच जनाको जुरीमा सबैको मत एउटै हुन्छन् भन्ने छैन । उहाँको नजरमा नम्रताले पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भएको होला । तर सबैले दिएको अंक जोड्दा नतिजा फरक आउँनु अस्वभाविक होइन । नागरिक दैनिकका कला सम्पादक समेत रहेका लामाले हल्लाको भरमा सत्यता नकेलाई पित पत्रकारिता नगर्न सुझाव पनि दिए ।